BUDDHIST TERMS' Dictionary: MIND - စိတ္တ
MIND - စိတ္တ
စိတ္တ - စိတ်၊ အာရုံသိမှု။
စိတ်သည် သတ္တလောကကြီးကို ဦးဆောင်၍နေ၏။ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် စိတ်၏အလိုသို့ လိုက်ပါ၍ နေကြရ၏။
All living beings are led by the mind. All living beings are subjected to the mind. Because of volitional activities, consciousness arises. Because of consciousness, mind and matter arise.